Ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD, ngokulula kube lula-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukususela kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD, kulula ukuze
Saye sathetha ngesi sihloko ngaphambili, ngokwenene, sinaloNdiyifumana isishwankathelo eyona nto ibhetele, kodwa andiyikuphepha isilingo sokuthetha ngenguqu enkulu elula eyenziwa ngumsebenzisi kwi-forum yeCartesia ngokufanelekileyo namhlanje.
Yiluhlu olulula lwe-Excel kunye neikholomu ukungena kwedatha, igama legama kunye ne-xyz izilungiso, ezifanelekileyo zokusingatha amaphuzu aphakanyisiweyo kunye nesitishi esipheleleyo esesetekeni esahlukaniswe ngama-commas. Njengamaxesha onke, ukuba nama macros kufuna ukuba bavunyelwe.
Kunokwenzeka ukuqwalasela ezinye iiparameter ezisisiseko ezifana nemibala, ubungakanani bombhalo, ukuba ukuphakama kuthathwa.
Into elula malunga nale sicelo kukuba ithumela idatha ngokuchanekileyo njengento ye-Ole, ngoko ke kufuneka ube ne-AutoCAD evulekile, nayiphi na inguqu kunye nenqaku lesakhiwo lenziwe. Yakha amaphuzu, iikhowudi kunye neetekisi kwinqanaba elithile.
Kudinga umboniso opheleleyo ukuze uzibonise zonke, amaphuzu ahamba kunye neetekisi zihlala kwi-0 phezulu.
Inomdla, nokuba ikhowudi ayikhuselwanga ukuze ufunde indlela abakhe ngayo.
Ndayilinga ngedatha endiyisebenzise kwakhona ukwakha iikali nge-AutoCAD Civil 3D kwaye isebenza ngokusemthethweni. Yiya khona kwaye uyikhuphele ukuze emva kokuba iphasiwedi okanye ingasadingeki, kufuneka ibhaliswe kwidilesi yeCartesia.
3D civil Office for ebulalayo
I-GIS 9 ... Ngokukhawuleza
kumqhubi womqhubi oveliswe kwi-PC, equlethe i-spreadsheets,
xa ndiyivula kwibhasi ye-mac, andiyi kubona iifom,
kwaye nakhu izifanekiso ezenziwe nge-Excel
Ndingafumana phi ulwazi oluthe xaxa okanye i-bilbiography kule ngongoma yokuxhuma ngokugqithiseleyo kunye ne-autocad?
UDaniel Sepúlveda uthi:
Konke okugqwesileyo, mbulela kakhulu iphepha,
Ngoku ndikhangele indlela eya kwizinto ezixhomekeke kwi-hyperlink yezinto kunye nedatha evela kubo kwi-autocad, umzekelo
Ukukhawuleza kunye nokuPhuma kwinqanaba (Excel) kwaye emva koko ku-Autocad, kwiipropati ezifanayo ezibonakalayo nedata.
Ndifuna ikopi yale nkqubo encinci _iindidali zifanele_nokuba ndiyikhansela njani___
Joyina amachaphaza? Ngaba ngumnatha wamanqaku, uthetha ntoni ngokujoyina amanqaku?
Alexander Duque uthi:
Izibingelelo esi sixhobo sibonakala si-EXCELLENT !!!, iphepha kunye neeposters, ezingenasidingo sokuthi !!!, ngabantu abahle kakhulu ukusinceda ngathi, ndiyomfundi weZakhiwo zoLuntu apha eColombia, zinikezele kwaye zasebenza kakuhle ndifuna ukwazi:
1) unako ukudibanisa namanqaku asele e-ACAD, kuba andiyi kubona ikhonkco enokundithabatha ukuba kukho uqeqesho apha.
Umbuzo wam kuphela kunye nemininzi enombulelo.